जब तपाईं एम्बियन र रक्सी मिक्स गर्नुहुन्छ के हुन्छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी औषधि बनाम मित्र खेलहरु घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य औषधि जानकारी कल्याण कम्पनी, समाचार समाचार, कल्याण मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> औषधि जानकारी >> जब तपाईं एम्बियन र रक्सी मिक्स गर्नुहुन्छ के हुन्छ?
जब तपाईं एम्बियन र रक्सी मिक्स गर्नुहुन्छ के हुन्छ?
अफिसमा लामो दिन पछि (वा घरबाट काम गर्दै), केही कामहरू सञ्चालन गर्दै, बेलुकाको खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने र लुगा धुने, बच्चाहरूलाई होमवर्क गर्न मद्दत गर्ने, र अन्तमा गिलास वाइन र नेटफ्लिक्सको मजा लिदै, तपाईं ओछ्यानमा ढल्नुहुन्छ। थकित महसुस गरे पनि, तपाईं सक्नुहुन्न निदाउनु , त्यसैले केहि समय पछि, तपाईं आफ्नो पर्ची औषधि को लागी, अम्बियन ।
तर पर्खनुहोस्! यो Ambien र रक्सी मिक्स गर्न सुरक्षित छ?
अम्बियन भनेको के हो?
एम्बियन (zolpidem) एफडीए द्वारा अनुमोदित एक औषधि हो, जो अनिद्रा उपचारको लागि छोटो अवधिको प्रयोगको लागि संकेत गरीन्छ। एम्बियन ट्याब्लेटहरूले सक्रिय घटक zolpidem tartrate, एक शामक-सम्मोहन औषधि समावेश गर्दछ। ब्रान्ड-नाम र जेनेरिक तत्काल वा विस्तारित रिलीज फारममा उपलब्ध छन् - भनिन्छ एम्बियन सीआर वा zolpidem tartrate विस्तारित रिलीज।
Adderall र adderall xr बीच के फरक छ?
अम्बियन एक तालिका IV हो नियन्त्रित पदार्थ दुरुपयोग वा निर्भरता को लागी सम्भावना को कारण। त्यस्तै, यो छोटो अवधि को उपयोग को लागी मात्र संकेत गरीन्छ, र लामो अवधिको लिन हुँदैन। जब स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तोक्छ, तपाई सुत्नु भन्दा पहिले तुरुन्तै गोली लिनु पर्छ, जब तपाई कम्तिमा सात देखि आठ घण्टा आरामदायी निद्रा पाउन सक्नुहुन्छ। सामान्य साइड इफेक्टहरूमा तन्द्रा, चक्कर, बदलिएको दृष्टि, सचेत सतर्कता, र बिग्रिएको ड्राइभिंग समावेश छ।
अम्बियन पनि एक छ कालो बक्स चेतावनी भन्छ कि औषधिले व्यक्तिलाई जटिल निन्द्रा व्यवहार भनिने कुनै चीजको अनुभव गर्न निम्त्याउँदछ, जस्तै निद्रा चलाउने, निद्रा चलाउने, वा कुनै पनि अन्य गतिविधिहरू जुन तपाइँ पूर्ण रूपमा ब्यूँझनुहुन्न। यी व्यवहारहरूले गम्भीर चोटपटक वा मृत्युसमेत ल्याउन सक्छ।
जब तपाईं एम्बियन लिनुहुन्छ, तपाईंको मेडिकल पेशेवरले तोकेको डोजलाई पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
एम्बियन र रक्सीको मिक्सनले के असर गर्छ?
अम्बियन र रक्सी खतरनाक संयोजन हो। वास्तवमा, क रिपोर्ट ड्रग एब्युज चेतावनी नेटवर्क (डीएडब्ल्यूएन) बाट पत्ता लाग्यो कि एम्बियन र रक्सीको संयोजन अम्बियन सम्बन्धित १ emergency% आपतकालीन कोठा भ्रमणको लागि जिम्मेवार थियो, १%% गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) मा प्रवेश आवश्यक थियो।
सबै भन्दा राम्रो जन्म नियन्त्रण कि तौल को कारण छैन
केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) डिप्रेसनन्ट औषधीहरूले GABA भन्ने पदार्थको क्रियाकलाप बढाउँछन्, जसले बेहिलो र शान्त प्रभाव पार्दछ brain तर दिमागको क्रियाकलापलाई ढिलो बनाउँदछ। यस अनुसार जानकारी तोक्दै , एम्बियनमा सीएनएस निराशाजनक प्रभावहरू छन्, जसले खतरनाक साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ जस्तै धीमा वा सास फेर्न कठिनाई, मुटुको धड्कन दर, र चेतना गुमाउने जस्ता।
जब बिरामीहरूले अन्य सीएनएस डिप्रेशनन्टहरू, जस्तै ड्रग्स वा मदिराको साथ अम्बियनहरू मिलाउँछन्, CNS प्रभावहरू बढाइन्छ। यसले गम्भीर बेहोरा, धीमा सास फेर्न सक्छ - यसले चेतना गुमाउन पनि सक्दछ - कोमा, वा केही अवस्थामा मृत्युसमेत। डीएडब्ल्यूएन अध्ययनले जनाएको छ कि emergency 57% आपतकालीन कोठामा अम्बियन ओभरडोजको लागि अर्को ड्रग वा मदिराको प्रयोग पनि सामेल छ।
एम्बियन र मदिरा मिश्रण गर्नाले अर्को दिनको कमजोरी (जो साइकोमोटर प्रदर्शन कमजोरी पनि कहलाइन्छ) लाई बढाउन सक्छ, ड्राइभि including कमजोरी सहित। एम्बियनले ठूला व्यक्तिहरुलाई झरनाको ठूलो जोखिममा राख्छ, त्यसैले रक्सीको साथ मिलेर, अर्को कमजोरी पनि हुन्छ, जसले झरना र फ्र्याक्चरको उच्च जोखिम निम्त्याउँछ।
के म रक्सीको साथ अन्य निद्रा गोलीहरू लिन सक्छु?
अम्बियन जस्तै, अन्य लोकप्रिय प्रिन्सिप्राक्ट निन्द्रा अनिद्राको लागि जस्तै Lunesta ( एजोपिक्लोन ) र सोनाटा ( zaleplon ), CNS निराश छन्। तिनीहरू z-ड्रगको रूपमा चिनिन्छन् र मदिरासँग मिल्नु हुँदैन, एम्बियन जस्तै कारणहरू।
ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) स्लीप एड्स जसमा डोक्सीलामाइन वा डाइफेनहाइड्रामिन हुन्छ अनिद्राका लागि लोकप्रिय उपचार विकल्पहरू हुन्, तर तिनीहरूलाई मद्य पनि मिसाउन सकिदैन। जे होस् यी औषधीहरू (लोकप्रिय ब्रान्ड नामहरूमा उपलब्ध Unisom , बेनाड्रिल , र Tylenol-PM ) ओटीसी हो, मदिरासँग मिसाउँदा एम्बियन जस्तै प्रतिक्रिया हुन सक्छ।
आहार पूरकहरू जस्तै melatonin वा भ्यालेरियन मूल अनिद्राका लागि प्रयोग हुने लोकप्रिय उपचारहरू हुन्। जे होस्, यी पूरकहरूले पनि रक्सीको साथ अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्। छोटकरीमा, प्राय स्लीप एड्स - प्रिस्क्रिप्शन वा ओटीसी adult वयस्क पेय पदार्थको साथ मिसिन सुरक्षित हुँदैन।
यदि तपाईं मदिरा र अम्बियन वा अन्य z- औषधिहरू नियमित आधारमा मिलाउनुहुन्छ, र त्यसपछि तपाईं रोक्नुहुन्छ, तपाईं सम्भवतः पाउनुहुनेछ फिर्ती लक्षण , जुन गम्भीर वा घातक पनि हुन सक्छ।
तपाईको अन्तिम रक्सीको आठ घण्टा भित्र, तपाईलाई टाउको दुखाइ, चिन्ता, वा धडपड हुन थाल्छ। लक्षण ज्वरो, पसिना, उच्च रक्तचाप, र भ्रम गर्न प्रगति गर्न सक्छन्। केही बिरामीहरूले अनुभव गर्छन्प्रलोभन काँप (डीटीएस), जुन केहि दिन पछि देखा पर्न सक्छ र विकृति, मतिभ्रमण, र दौर्ने कारणहरू हुन सक्छ।
जब तपाईं एम्बियन लिन रोक्नुहुन्छ, फिर्ती लक्षण दुई दिन भित्र देखा पर्न सक्छ। यी लक्षणहरूमा चिन्ता, कम्पनहरू, मुड स्वि ,्ग्स, डेलीरियम, आतंक हमला, र दौरा पर्न सक्छ। यसको कारणले गर्दा, एक रोक्न प्रयास गर्दा एक चिकित्सा पेशेवरको सहयोग लिनु महत्त्वपूर्ण छ।
Ambien र रक्सी लत को लागी उपचार
यदि तपाईंसँग एम्बियन र रक्सीको लत छ भने, तपाईंलाई एक चिकित्सकीय निरीक्षण गरिएको डिटोक्स प्रोग्राम आवश्यक पर्दछ। डिटोक्स पछि, तपाईंलाई पुनःभवास आवश्यक हुन सक्छ, व्यक्तिगत, समूह, र परिवार परामर्श समर्थन समूहहरू, र औषधिको साथ। तपाईं डाक्टरहरू, नर्सहरू, र अन्य स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरूसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ जो व्यसन विशेषज्ञहरू हुन् र तपाईंलाई तपाईंको उत्तम समग्र स्वास्थ्यमा फर्किन सहयोग गर्दछन्।
सहायता लिनु व्यसन उपचारको पहिलो चरण हो। यदि तपाईंलाई तपाईंको रक्सीको दुरुपयोग र अम्बियन लतका लागि मद्दत चाहिएमा, तपाईं आफ्नो मेडिकल पेशेवरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ वा उपचारको बारेमा र / वा पुनर्वास केन्द्रहरूको बारेमा जानकारी अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ SAMHSA (पदार्थ दुरुपयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रशासन) को राष्ट्रीय सम्पर्कमा १- 800-662-HELP वा मा खोजी गर्दै SAMHSA वेबसाइट । मनोविज्ञान आज अर्को सहयोगी श्रोत हो।
Sleep सुरक्षित उपायहरू निद्रा विकारहरू प्रबन्ध गर्न
यदि तपाईं आफ्नो रातको गिलास वाइन छोड्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं केहि गैर औषधी विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो निद्रा सुधार अम्बियनको सट्टा। निद्रा स्वच्छता एक शब्द हो जुन राम्रो निद्रा बानी विकासलाई जनाउँछ। यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:
tylenol सुरक्षित छ जब गर्भावस्थामा लिन सकिन्छ
तपाईंको सुत्ने कोठा सुत्ने योग्य बनाउनुहोस्। हल्ला र प्रकाश राख्नुहोस्, र आरामदायक तापमानमा सुत्न जुन अत्यन्त न तातो वा चिसो हो। निद्रा र सेक्सको लागि मात्र तपाईंको ओछ्यान प्रयोग गर्नुहोस्।
एक सुसंगत निद्रा तालिका विकास गर्न प्रयास गर्नुहोस् सुत्ने जाँदा र हरेक दिन उही समय जाग्ने बेरमा सप्ताहन्तमा पनि। दिनको समयमा ढिलाइ राख्नुहोस् र ढिलो नगर्नुहोस्, वा यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने टाढा रहनुहोस्।
निद्रा तालिका सिर्जना गर्नुहोस्। बिना उपकरणको ओछ्यानमा तल हावा लिन केही समय लिनुहोस्aपुस्तक पढ्नुहोस्, केही आराम गर्नुहोस्, र बत्तीहरू कम गर्नुहोस्।
दैनिक व्यायाम शारीरिक गतिविधि यसलाई छिटो निदाउन सजिलो बनाउन सक्छ।
तपाईं के खानुहुन्छ र हेर्नुहोस्। क्याफिन घटाउनुहोस् (विशेष गरी पछि दिनमा)। सुत्नेको समय नजिकमा बोसो, चिल्लो, वा मसलादार खानाहरू बेवास्ता गर्नुहोस्। यदि रक्सीले तपाईंलाई माथि राख्छ भने, साँझ सम्म धेरै पिउन कोसिस गर्नुहोस्।
धुम्रपान रोक्नुहोस्। निकोटीन निद्रा सुरु गर्न कठिनाईसँग सम्बन्धित छ।
यदि तपाईंसँग एम्बियन (र निद्रा सम्बन्धी मुद्दाहरू) को बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, यसको प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू, र एम्बियन र मदिरा संयोजन गर्दै, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई पेशेवर चिकित्सा सल्लाहको लागि सोध्नुहोस्।
800 मिलीग्राम ibuprofen र 1000 मिलीग्राम tylenol
वालमार्ट मा lisinopril को लागत कति छ?
के तपाइँ sudafed pe संग mucinex लिन सक्नुहुन्छ
के एक uti छिटो बाट छुटकारा पाउँछ
तपाइँ एक प्रोबायोटिक र एकै समयमा एक एंटीबायोटिक लिन सक्नुहुन्छ
घाँटी दुख्ने र नाक भरीको लागी औषधि
नाक बग्ने र हाछ्युँ को लागी चिसो औषधि